साताको पहिलो दिन सुनको मुल्य कति ? सुनको मूल्य अब के होला ? – " सुलभ खबर "
साताको पहिलो दिन सुनको मुल्य कति ? सुनको मूल्य अब के होला ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजारमा कारोबार भएकोमा आज पनि सोहि मूल्य कायम गरिएको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९६ हजार ५ सय रहेको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । शुक्रबार तोलामा १३३० मा कारोबार भएकोमा आज १५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १३१५ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
बजारशास्त्रमा प्रतिफललाई जो’खिमबापतको पुरस्कार मानिन्छ । अर्थात्, जुन क्षेत्र लगानीको लागि बढी सुरक्षित हुन्छ त्यसमा प्रतिफल कम हुन्छ र जुन क्षेत्र बढी जो खिमपूर्ण हुन्छ, त्यसको प्रतिफल पनि बढी हुन्छ । तर, सुनले पछिल्लो समय फेरि एकपटक विश्व बजारले स्वीकार गरेको यो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको सुनको लगानीमा पछिल्ला २ महिनामै १५ प्रतिशत भन्दा लाभ प्राप्त भइसकेको छ । २ वर्षअघि लगानी गर्नेले यतिबेला करिब ६५ प्रतिशत नाफा कमाइसकेका छन् ।
त्यसो त, विश्व बजारमा सुन र डलरको मूल्यको सहसम्बन्ध सधैँ न कारात्मक हुन्छ । अर्थात् सुनको मूल्य बढ्दा डलर घट्ने र डलर बढ्दा सुनको मूल्य बढ्ने हुन्छ । सुन र डलरबीचको मूल्यको ऐतिहासिक चित्रले यस्तै देखाउँछ । तर नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । विगत ५ वर्षदेखि सुनको मूल्य र डलर दुवै महँगो बन्दै गएको छ । ५ वर्ष अघि एक अमेरिकी डलर किन्न १०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा खर्च गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यो दर १२० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अर्थात् नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर अवमूल्यन होइन, अधिमूल्यन भइरहेको छ । उता सोही समयमा सुनको मूल्य करिब ४८ हजार रुपैयाँबाट बढेर ९८ हजार रुपैयाँ प्रतितोला पुगेको छ ।
यसरी डलरको किन्न बढी खर्चनुपर्ने र सुनको मूल्य चाहिँ डलरको तुलनामा बढ्दै जाने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६०र६५ प्रतिशत कमाइ हुँदा नेपाली बजारमा सुनमा लगानी गर्नेले शत प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य कमाएका छन् । पछिल्लो केही समय भने डलरसँगको ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन ।
लकडाउनको लभभग ७० दिनपछि खुलेको कारोबारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । लकडाउन खुल्नेवित्तिकै सुनको मूल्य तोलामा १० हजार रुपैयाँले बढे पनि मूल्य बढेको एक हप्ता हुन नपाउँदै प्रति तोला ९० हजार रुपैयाँको हाराहारी पुगेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य ८९ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रति तोला ८९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा चाँदीको मूल्य भने खासै वृद्धि भएको छैन । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला ९ सय २५ रुपैयाँ कायम रहेको छ । सोमबार मात्र सुन प्रति ग्राम १ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ ६० पैसाले बढेको छ । लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि छापावाल सुन प्रति तोला ७७ हजार रुपैयाँ र तेजावी सुन प्रति तोला ७६ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो । लकडाउन भएसँगै सुनको मूल्य १२ हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको हो ।
उनले भने, ‘सुनको भाउ केही समय घट्ला भन्ने आशा छैन अहिले । मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्था छ । सहज रूपमा क्रय बिक्रय हुन नसक्नु, आयात गर्न नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने छाँटकाँट नहुँदा पनि नेपाली बजारमा केही समय सुनको मूल्य घट्दैन ।’ धैर्य राख्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।